Iibhola zoxinzelelo lwe-Unicorn, iithoyi ze-Unicorn squishy, ​​iStress squishy-Meibaoli
Weifang Meibaoli Sponge Iimveliso Co., Ltd.
Imemori yeepilisi zeMemori
U Uhlobo lwePilo yokuHamba
DB amagwebu zokudlala
I-PU Foam Squishy zokudlala
I-PU Foam Iibhola zoxinzelelo
I-PU Foam Frisbee / iDiski yokubhabha
I-Makeup Sponge / Puff
Isiponji soMatshini weTeardrop
Yenza isiponji ngeSika
I-PU Foam Yoga Intonga
I-PU Foam yeebhola zeYoga
Wamkelekile kwi Meibaoli
Weifang Meibaoli Sponge Products Co., Ltd ise-Weifang City, kwiphondo Shandong, China. Indawo ephezulu yejografi, ekufuphi nezibuko laseQingdao yindlela yothutho elula kakhulu eqinisekisa ukuhanjiswa kwangoko. I-Meibaoli Sponge Iimveliso zeNkampani yiminyaka engaphezu kwe-10 umenzi wobuchwephesha ozibandakanya ekuveliseni iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso zesiponji, ezinje nge-PU iibhola zokulwa noxinzelelo, izinto zokudlala ezinama squishy, ​​uhambo lokuma u-pillows, imilo yokulala amagwebu, imithwalo yeofisi kunye nesiponji sobuhle. Iimveliso zikhuphisana kakhulu nomgangatho ophezulu kunye nexabiso elihle kakhulu ezamkelekileyo kakhulu kwaye zamkelwe ngokufudumeleyo ziimarike zehlabathi. Okwangoku, ezi mveliso ziye zithunyelwa eKhanada, e-United States of America, kumazwe ase-Europe nase-Mid-mpuma.
Ingcali kwiimveliso ze-foam ze-PU.
inkumbulo amagwebu gel ibhedi umqamelo
Imemori ye-foam ye-foam
U jonga umqamelo wokuhamba
I-soft pu foam frisbee
Iibhola zoxinzelelo zoxinzelelo
Iithoyi ze squishy
I-Yogo massage roller kunye neebhola
Tyelela iwebhusayithi yethu
Ukuba unethuba lokusebenzisana okanye naluphi na uhlobo lokubuza, ingxelo, singathanda ukuva kuwe.
Iisampulu Custom ezikhoyo
Gcina isantya namaxesha, uvulandlela kwaye wenze izinto ezintsha, kwaye usebenze intsebenziswano kwihlabathi liphela ngesimo "sokuphumelela".
Ungacoca njani iqanda lobuhle
Amaqanda okubumba yimveliso esiyisebenzisela ukwenza izithambiso. Zininzi iintlobo zamaqanda okwenza kwimarike, kodwa iziphumo ziyafana. Emva kokusebenzisa iqanda elenziwe ngophawu, ukucoca kubalulekile. Ngaba uyazi ukucoca iqanda lokwenza i-makeup? Namhlanje, ndiza ...
Uyikhetha njani umqamelo2
Umqamelo ofanelekileyo onesiphumo sonyango kwi-spondylosis yomlomo wesibeleko ngumqamelo we-foam ocinezelayo. Ngokubanzi, abantu abanengxaki yomqolo wesibeleko bakhetha imiqamelo ye-Kangjin Shule eyenziwe nge-thermal compression foam pillows, kuba imilo ...
Uyikhetha njani umqamelo1
Umqamelo ongalunganga, ophethwe ngumqolo wesibeleko Imithwalo idlala indima ebalulekileyo ekulaleni kwabantu. Umqamelo ofanelekileyo unokukunceda ulale kamnandi ngakumbi. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwexesha elide komqamelo ongafanelekanga kuya kubangela uthotho lweengxaki ezingapheliyo kwaye kude kuphuhle ...
Imvelaphi yaseTshayina yomqamelo
Umqamelo luhlobo lwesixhobo sokulala. Kukholelwa ngokubanzi ukuba iipilo zizalisa abantu ngokulala kamnandi. Ngokophando lwangoku lwezonyango, umqolo womntu ulayini ochanekileyo ukusuka ngaphambili, kodwa unamagophe amane omzimba ...
Ungayikhetha njani eyona mithwalo yememori ilungileyo
Imemori i-foam pillows iqulethwe ngamagwebu ashinyeneyo abuyela kwimeko yayo yantlandlolo emva kokulala kwaye ahlala enika inkxaso entle yentamo. Oku kudumile kuba kunciphisa amanqaku oxinzelelo ngokuqhubeka ukubumba ...
I-China Inqamleze umda we-E-Commerce Trade Fair (Fair KWA)
I-China Cross-border E-Commerce Trade Fair (i-Fair KWA) ngumnyhadala wezorhwebo obanjelwe ukudibanisa ukukhula ngokukhawuleza kwemida ye-E-yorhwebo ngezixhobo zechungechunge lwezinto eziphilayo kunye nokubonelela abathengisi abasemgangathweni kunye nabaququzeleli kumaqonga emida ...
IsiTshayina Zodiac Umxholo Squishy Gel Pen kunye Notebook Ngaba Wel ...
Inkampani yethu inemixholo elishumi elinambini yezodiac yezodiac yezilwanyana kunye neencwadana zokubhala, zenziwe ngabaqulunqi abaninzi, izimvo zethu zemveliso ziphefumlelwe ngamabali amaTshayina e-zodiac kwinkcubeko yemveli yaseTshayina. I-zodiac yaseTshayina zizodi yaseTshayina ...
Ukuba kukho naziphi na iimveliso ezinomdla kuwe, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Enkosi!